CAYR MAXAMED COMMUNITY Club on Clubhouse - Followers, Members, Statistics
CAYR MAXAMED COMMUNITY on Clubhouse
Ku soodhawaada cayr maxamad community waa madal ay ku kulmaan dhalinyarada ugu qiimaha iyo qadarinta badan ee isticmaasho clubhouse 👑
#Cayr Maxamed waa Beel-weenta Habargidir
tariikhda Cayr & Aqoonyahanada Cayr
Beesha Cayr Ayaa u Dhalatay sidaan.
Besha waxa lagu tiriyaa dadka ugu horeeyay Dalka keenay Ama Soo Celiyay adeegyada Daruuriga ah ama lagama maar maanka ah Sida isbtaalada hooyada & dhalanka Banaadir, Shifo Hospital hurwaa, Dawoyinka sida SHIFA pharmacy, Cuntada sida Warshada burka iyo Badarka ee sahal (waxara Cade), warshada Omada, saabunta Dalsan, warshad shaambada Som-electric. Iyo
Warshadda weyn soo saarto kuraasta plastic
Waana Warshada Ugu weyn Oo ku taalo Caasimadda somalia mugdisho waxeyna Soo saartaa kuraasta Caagaga ah & Alaabo Badan
Waxaa jirro Warshada weyn Oo Soo Saarto Caanaha Zamzam Bahja & Kuwa kale fara badan.
Waxaa si weyn loogu xasuusan karaa Shirkadaha isgaarsiinada Interneyada sida Global internet iyo Stanard internet, waxay kaloo masuul ka ahaayeen shirkada Coca-cola. Beesha waxa kaloo aan ku xasuusan karnaa Dadkii ugu horeeyay oo keeno isgaarsiinta ey Dadka ku wada xiriiraan tan markii ey meesha ka baxday dowladii dhexe ee soomaaliyeed taasoo Bulshada Soomaaliyeed Aad ugu Riyaaqday furida Shirkadaha telefanada TELCOM SOMALIA [*] iyo Nationlink waxey Beesha ka shaqeysay sare u soo qaadida iyo Hormarka ummada soomaaliyeed tan iyo Markii ey meesha ka baxday dowladii dhexe ee Soomaaliya. Dadka Caanka Ah
Beeshu waxay leedahay dad caan ka dhex ah ummada soomaaliyeed Sida: Siyaasiyiin, janaraalo, Ganacsato, Odayaal dhaqameydo, Culuma'udiin, Aqoonyahano, Fanaaniin, Abwaano, & Ugaas iyo wax garadka farabadan. Kuwaasi waxaa ka mid ah Siyaasada & Maamulka.
• Cabdiqaasim Salaad Xassan, madaxweynihi hore Dowladii TNG Soomaaliya.
• Ugaas Xasan ugaas Maxamed ugaas Nuur
• Jeneral xusen cayrow
• General Yusuf maxamed siyaad indhacade
• General maxamed Nuur GALAAL.
• Jeneral Maxamed Rooble Jımcaale (Goobaale)
• GENERAL Elmi Rooble Ali AUN taliyahii Saldhiga Afgooye & Baydhabo ( 1967 )
• Cabdi Shakur Sh Xasan
• Maxamad Cismaan Caruus Afahayeenkii
May 07, 2022 1,700 +100 +6.3%
March 11, 2022 1,400 +313 +28.8%
November 23, 2021 1,087 +9 +0.9%
November 22, 2021 1,078 +51 +5.0%
November 19, 2021 1,027 +49 +5.1%
November 17, 2021 978 +43 +4.6%
November 15, 2021 935 +26 +2.9%
November 13, 2021 909 +16 +1.8%
November 11, 2021 893 +10 +1.2%
November 09, 2021 883 +1 +0.2%
November 08, 2021 882 +60 +7.3%
November 06, 2021 822 +10 +1.3%
November 05, 2021 812 +14 +1.8%
November 04, 2021 798 +47 +6.3%
November 01, 2021 751 +1 +0.2%
October 31, 2021 750 +5 +0.7%
October 30, 2021 745 +10 +1.4%
October 29, 2021 735 +5 +0.7%
October 28, 2021 730 +2 +0.3%
درود، تازه چه خبر؟
世界名校父母说 Ivy Parents
FRUTAS N’ PUTAS
Health & Social Care Club